Archives des Mpanendaka - Midi Madagasikara
Antsirabe : Mpanendaka roa lahy voasambotry ny polisy
Redaction Midi Madagasikara 31 janvier 2014 Antsirabe, Mpanendaka, voasambotry ny polisy
Mpanendaka roalahy indray no saron’ny polisy ny alatsinainy 27 janoary lasa teo tokony ho tamin’ny 11 ora alina, teo akaikin’ny Zaodahy Antsenakely. Nitombo isa tato ho ato ny faritra tsy azo lalovana amin’ny alina eto Antsirabe fa feno mpanendaka sy mpanao sinto-mahery. Eny fa na dia amin’ny andro antoandro aza dia misy ireo olon-dratsy manao…
Ambohimanarina : Mpanendaka roalahy tratran’ny pôlisy
Redaction Midi Madagasikara 24 janvier 2014 Ambohimanarina, Mpanendaka, tratran’ny pôlisy
Mpanendaka gaigilahy roa no nosamborin’ny pôlisy avy ao amin’ny boriborintany faha-6 teny Tsararay Ambohimanarina ny alarobia teo tokony ho tany amin’ny 1 ora. Fiaraha-miasa eo amin’ny andrimasom-pokonolona no nahitana izao vokatra izao. Izany Benasolo izany, 20 taona sy Rado Kely 19 taona no anaran’izy roalahy ireto. Eny amin’iny faritra Ambohimanarina iny no tena famelezan-dry zalahy.…
Antanimena : Mpanendaka voasambotra, niharan’ny fitsaram-bahoaka
Redaction Midi Madagasikara 22 janvier 2014 Antanimena, fitsaram-bahoaka, Mpanendaka
Nahare antsovonjy ny mponina teny Antanimena omaly alina tokony ho tamin’ny 9 ora. Maro no sahy nivoaka ny trano avy hatrany, satria tsy mbola natory. Teny an-dàlana ihany koa, mboloa nisy mpandalo vitsivitsy. Mpanendaka telolahy no nifanenjehana tamin’izay. Tafaporitsaka ny roa fa voasambotra kosa ny iray. Avy hatrany dia niharan’ny daroka teo ity farany ity.…